Nify 13 Walk bead cap Mpanamboatra sy mpamatsy | China 13 nify Mandeha vakana
12 nify mandeha vaky fitaratra bo ...
Tefumezy nify 13 mandeha tongotra ...
Perfum miloko maro loko 13 ...
Menaka Perfume 13 Mandeha Bead Bead fitaratra roa loha
Ity dia kosmetika misy tavoahangy fitaratra amin'ny lafiny roa. Ny endrika dia tena vaovao, toy ny cudgel volamena. Tena malaza amin'ny besinimaro izy io.
Ity dia tavoahangy fitaratra karazana vakana, manohana ny fampiasana ny kitapo vakana.
Ny fahafahan'ny tavoahangy fitaratra dia tsy voatery. Ny savaivon'ilay tavoahangy fitaratra dia nify 13, ary matetika dia 3ml, 5ml sns ny fahaizany, ary ny LOGO sy ny teny hafa dia azo atao pirinty amin'ny tavoahangy fitaratra.
Ny haben'ny fonon'ny aluminium dia lava kokoa, amin'ny ankapobeny 15 * 35, foana ny faran'ny roa, ary ampidirina ny fonony anatiny.
Misy karazana vakana telo amin'ny ankapobeny, vakana fitaratra, vakana plastika, vakana vy, miankina amin'ny filan'ny mpanjifa.
Ity dia tavoahangy baolina misy menaka manitra, ny fisafidianana fahaiza tavoahangy fitaratra dia betsaka kokoa, mitovy kalitao, mifanitsy amin'ny nify 13, ny lokon'ny tavoahangy fitaratra araky ny hita eo amin'ny sary, tavoahangy fitaratra mangarahara, ary koa tavoahangy vera volontany, kely ny volon'ny ranomanitra matetika, satria miovaova haingana, ka haingana kokoa ity fanjifana tavoahangy menaka manitra ity.
Ity tavoahangy vera ity dia afaka mifanaraka amin'ny fitaovana telo an'ny vakana vakana, plastika, vera, vakana vy. Safidio araka ny filan'ny mpanjifa.
Ny famaritana aluminium fonosin'ity tavoahangy vera ity dia 15 * 22, dia vava visy 13, ny loko manana mainty mamirapiratra, mena mamirapiratra sns., Dia azo sokirina arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Sehatra fampiharana: ity tavoahangy manitra mandeha amin'ny menaka manitra ity dia ampiasaina amin'ny menaka manitra indrindra, fa azo ampiasaina ho an'ny menaka manitra, ampiasaina bebe kokoa any Afrika, Indonezia ary firenena hafa.
Tavoahangy fitaratra mangarahara misy karazana visy io. Matetika dia manana capacité 3ml, 5ml, 6ml, sns. Mifanaraka amin'ny satroka aluminium misy nify borosy 13 izy io. Amin'ny ankapobeny dia azo ampiasaina amin'ny famenoana ranomanitra, tavoahangy famenoana tavoahangy fitaratra manana tombony maro, tavoahangy fitaratra mangarahara fampisehoana fofona manitra, ary avo lenta ny fiarovana tombo-kase tavoahangy fitaratra. Ny haben'ny cap aluminium manohana azy dia 15 * 22. Izy io dia satroka hemp vita sokitra vita amin'ny fasika, izay azo ampiasaina amin'ny fizotran'ny electrolysis na ny afomanga. Misy karazany telo koa ny fanohanana ny vakana, ny vakana plastika, ny vakana fitaratra ary ny vakana.